प्रभास अभिनित ‘साहो’ले १० दिनमा कति कमायो? - Everest Dainik - News from Nepal
प्रभास अभिनित ‘साहो’ले १० दिनमा कति कमायो?
काठमाडौंः बलिउड अभिनेता प्रभास र श्रद्धा कपुर अभिनित चलचित्र ‘साहो’ ले १० दिनमा करिब ४ अरब कमाइ गरेको छ ।
३० अगस्टमा रिलिज भएको उक्त चलचित्र अझै हलमा जारी रहेको र अझै प्रदर्शन गर्न सकिने अनुमान गरिएको छ । यो फिल्मले विश्वव्यापी र दक्षिण भारतमा राम्रो प्रदर्शन गरिरहेको छ ।
फिल्ममा ज्याकी श्राफ, चंकी पाण्डे, नील नितिन मुकेश, मन्दिरा बेदी, महेश मांजरेकर, अरुण विजय र मुरली शर्माको पनि भूमिका रहेको छ ।
चलचित्रले दर्शकहरुबाट धेरै प्रशंसा कमाइरहेको छ । फिल्मले पाँच अर्बको आकडा पार गर्ने आशा राखिएको जनाइएको छ ।
याे पनि पढ्नुस ‘साहो’ले तीन दिनमा कमायो २ सय करोड
ट्याग्स: प्रभास, साहो